Sida loo sameeyo a Digital Photo collage on Mac
> Resource > Mac > Sida loo sameeyo a collage Digital Photo ee Mac
Collage sawir A waa, hadiyad weyn xiiso-to-samaynaysaa shakhsi DIY fasax xubnaha qoyska iyo saaxiibada xiran. Haddii aad tahay user Mac ah, aad ku kaydsan ururinta weyn ee photos in iPhoto. Haddaba maxaad kama dhigi collage sawir in yaabiyo doonaa saaxiibadaa ah? Waxaan aaminsanahay collage abuura u Mac waa mid caawisa oo ku wanaagsan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud oo dhaqso uga dhigi sawirka midig collages aad Mac. Iyadoo 200+ arrimo customizable ku salaysan jeer uu ka soo xusho, waxaad ka heli doontaa la abuuro collage sawir digital shakhsiga neecaw. Waxay ku siinaysaa siyaabo ka badan si ay u wadaagaan, daabacaadda, email, Facebook iyo Flickr. Eeg sida si ay u abuuraan collage xiiso-to-share digital ee Mac leh talaabooyin yar oo sahlan.
1 Samee mashruuc collage cusub
Download iyo rakibi digital photo maker.This collage app waa in si toos ah la bilaabay marka loo xirxiro ay ka badan tahay. Ka dib markii in guji "Abuur collage" si ay u bilaabaan mashruuca cusub ah, ama "Quick collage" si toos ah u helaan sawirada iPhoto.
2 qaado arrimo collage iyo dar sawiro
Daaqadda pop up ka, dooro template aad sida ugu guji Dooro. Browse photos ee khayraadka daaqadaha dhanka bidix iyo jiidi sawiro aad rabto in aad ka mid ah in collage in ay template.
3 Edit sawiro (optional)
Waxaad ku dari kartaa saamaynta sawir, darto saamaynta maaskaro, qabsato gaadhista, midabka, iwm ee sawiradaada. Ka sokow, xubno ka decoration ayaa sidoo kale lagu dari karaa, tirtiray, Asakrtii ama wareejiyo.
4 Save ama wadaagno collage
Marka aad si fiican u qanacsanayn goobaha iyo saamayn, waxa la joogaa wakhtigii si ay u wadaagaan. Riix dhoofinta iyo dooranayaan ah si loo badbaadiyo ama la wadaagto aad collage digital. Dabcan, aad iyaga ka soo daabacan kartaa haddii aad leedahay aad printer u gaar ah.
Halkan waa muunad collage sawir abuuray by collage abuura u Mac
Bilow abuuro kuu gaar ah collage sawir ee Mac hadda!